အဘယ်သူသည် Forex ကုန်သွယ်မှု - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်အဘယ်သူသည် Forex ကုန်သွယ်မှု
အဘယ်သူသည် Forex ကုန်သွယ်မှု? ငွေဖြစ်လွယ် & ပါဝင်
တစ်နေ့လျှင် $4ထရီလီယံထက်ကျော်လွန်တဲ့ကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ Forex ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအရည်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, volume ထဲမှာကုန်သွယ် Forex အဆိုပါ bis (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖြေရှာဘဏ်) ကိုအဓိကဈေးကွက်သင်တန်းသားများနှင့်အတူကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်နှင့်ရရှိသောတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းဖန်တီးသုံးနှစ်တစ်ကြိမ်သော်လည်းအဘယ်သူမျှမဒေတာ, မရရှိနိုင်ကြောင်းကိုဒါမြင့်မားသည်။
နိုင်ငံခြားရေးလဲလှယ်တူရိယာ 1,527 1,239 1,934 3,324 3,981
အစက်အပြောက်အရောင်းအဝယ် 598 386 631 1,005 1,490
ပြီးစီးကို Forward 128 130 209 362 475
နိုင်ငံခြားသုံးငွေလဲလှယ်ရေး 734 656 954 1,714 1,765
ငွေကြေးလဲလှယ်ရေး 10721 31 43
Options ကိုများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ 87 60 119 212 207
ရင်းမြစ်: Triennial ဗဟိုဘဏ်စစ်တမ်း, 2010
အထက်ပါဇယားသည်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေ့စဉ်ပြောင်းလဲမှုသည်အလွန်မြန်ဆန်သောနှစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြသည်။ 0.8 trillion မှ 1992 trillion မှ 3.9 trillion အထိ 2010 အားဖြင့်အရွယ်အစားသည်သုံးဆတိုးပွားလာသည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာသမ္မတနစ်ဆင်သည်ရွှေ ၀ င်းဒိုးကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်အခြားငွေကြေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကငွေကြေးများအပေါ်တွင်သာကျန်ရှိနေသောကြောင့် Forex သည်သိသိသာသာကျယ်ပြန့်လာသည်။ စျေးကစားသူများသည်အမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သော 10 နှစ်များအတွင်းငွေကြေး၊ ကုန်သွယ်မှု၌ရွှေရွှေအလျင်အမြန်ဖြစ်ပျက်မှုသည်အင်တာနက်၊ ယူရိုအသစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့်အသစ်ပြုပြင်ထားသောနည်းစနစ်များကြောင့်ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်နှင့်စျေးကွက်ငွေဖြစ်လွယ်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုန်သည်ကြီးများနှင့်အသေးစားကုန်သည်များအနေဖြင့် Forex သည် ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဈေးနည်းသောကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင်လျင်မြန်စွာဖြစ်လာပြီး၎င်းတို့၏မှန်းဆသည့်အရင်းအနှီးများကိုထိုနေရာတွင်ပိုမိုရွေ့လျားနေသည်ဟုခံစားနေကြရသည်။
ကိုယ့်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ $4ထရီလီယံနေ့စဉ်ငွေပေးငွေယူ volume အထားရန်, ကအတူတူအားလုံးစတော့ရှယ်ယာ-ဖလှယ်မှုထက် 100 ကြိမ်ပိုမိုကြီးမားသည်။ သင်နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း၏ $ 25 ဘီလီယံအထိတစ်ရက်အသံအတိုးအကျယ်ကနှိုင်းယှဉ်လျှင်, သင် Forex နေဆဲအရှိဆုံးလူများအတွက်တကျွန်းတနိုင်ငံသားအယူအဆစဉ်ကစတော့ရှယ်ယာထိုကဲ့သို့သောကြီးမားလူကြိုက်များရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်မည်သို့မည်ပုံ၏အမြီးအမောက်အပေါ်စဉ်းစား။
ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နေ့စဉ်ငွေပေးငွေယူတဲ့ volume ရှိခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ?
ချက်ချင်း Execution: အဆင့်မြင့်ငွေဖြစ်လွယ်သေဒဏ်စီရင်မှာချက်ချင်းဝစွာသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ min နှောင့်နှေး.
မျှော်လင့်ထားသည့်စျေးနှုန်းမှာ execution: အဆင့်မြင့်ငွေဖြစ်လွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ထားစျေးနှုန်းမှာပွညျ့စုံခံသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ min slippage (အလွန်အရေးကြီးတဲ့သတင်းကြေငြာစဉ်ကာလအတွင်း မှလွဲ. ) ။
Forex ဒီတော့ Big Is ရှိလျှင်, အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါစတော့အိတ်စျေးအမျှနာမည်ကြီးသည့်အတိုင်း Forex မဟုတ်လော
အချက်နှစ်ချက်။ ၎င်းသည်အဟောင်းမဟုတ်သကဲ့သို့မကြာသေးမီကမှသာ“ လက်လီ” ကုန်သည်ကြီးအားလက်လှမ်းမီလာခဲ့သည်။
ထိုအပေါ်ပထမ, အကြီးစားထင်ကြေး အခမဲ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်းများပြောင်းလဲနေသောငွေလဲလှယ်နှုန်းသည်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘရက်တန်ဝုဒ်ငွေကြေးစနစ်ပြိုကွဲပြီးနောက် (“ ပုံသေ”) အဓိကကျသောငွေကြေးများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် 1971 တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ) ။ သြဂုတ်လ 1971 တွင် Nixon သည်ရွှေသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုရပ်စဲလိုက်သည်။ ၎င်းသည်သတ်မှတ်ထားသော“ ရွှေကျောထောက်နောက်ခံ” စနစ်၏ 26 နှစ်သက်တမ်း (1945-1971) ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးငွေကြေးကိုထပ်မံခွင့်ပြုခဲ့သည် အခမဲ့ ရေပေါ်နှင့်သာစက္ကူကိုအခြေခံပြီး (Fiat) ။ နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း (NYSE) မတူဘဲတက 17 + တစ်နှစ်ခေါင်းကိုစတင်ပေးသောမေလ 1792, 179, ဝန်းကျင်ကတည်းကသိရသည်။
အပေါ်ထို့အပြင်ပင်သော်လည်းထင်ကြေး အခမဲ့ ငွေလဲနှုန်းအမျိုးမျိုးသည် 1971 နောက်ပိုင်းတွင်သာရှိခဲ့သည်။ 1996 သည်ပုဂ္ဂလိက (လက်လီ) ဖောက်သည်များက၎င်းကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်များနှင့်ခြံရန်ပုံငွေကဲ့သို့အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသာ, ကကုန်သွယ်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့အတွက်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တာကြောင့်ငါတို့ဟာအရင်ကသီးသန့်ချမ်းသာခဲ့တဲ့ကလပ်အသင်းထဲဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ 1998 အရအင်တာနက်သည်လူကြိုက်များလာပြီးပွဲစားများစွာအားအွန်လိုင်းဆိုင်ဖွင့ ်၍ သေးငယ်သည့်ကုန်သည်များသည်နိုင်ငံခြားငွေကြေးအတွဲများ၏အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီတော့ Forex သေးငယ်ကုန်သည်များမှအတော်လေးအသစ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုကြီးနှင့်အဆပိုမြန်တော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထက်ကြီးထွားလာနေစဉ်, ရှေ့မှာအချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်အဖြစ်လူသိများဖြစ်လာသည်။
တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်လွန်ခဲ့တဲ့အ Forex ဈေးကွက်ထဲမှာအဓိကပါဝင်သူများအကြောင်းရင်း (စသည်တို့ကိုထင်ကြေး, ခြံ,) ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးများအတွက်အခြားဘဏ်များဆန့်ကျင်ရာထူးယူသောစီးပွားဖြစ်ဘဏ်များ ရှိ. , ကုမ္ပဏီတွေ (တင်ပို့သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတင်သွင်းတဲ့) ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားငွေအရောင်းအဘို့အဘဏ်များ။ ဤအမှုအလုံးစုံလှုပ်ရှားမှု Forex အတွက်ထုတ်ပေးခြုံငုံ volume ၏အကြောင်းကို 70% သည်မှတ်။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, သို့သော်, စျေးကွက်ပြောင်းလဲခဲ့၏။ အသစ်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပိုပြီးလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူပြည်ပငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာလုပ်ဆောင်သွားရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူအခြားအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များက။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလထင်ကြေးတစ်ဦးငွေကြေးကိုဝယ်ယူသင်တန်းသားများကိုအများစုကအထူးသဖြင့်ငွေကြေးလက်ခံရရှိမရှိရည်ရွယ်ချက်ကိုရှိသည်သောအဓိပ်ပာယျ, ခြုံငုံနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုထက်ပို 95% တွက်သည်။ ဤရွေ့ကားအရောင်းအဦးချင်းကုန်သည်များမှစီးပွားဖြစ်ဘဏ်များထံမှကောက်ယူကြသည်။
Forex အတွက်အဓိကပါဝင်သူများဖြစ်ကြ၏ ဘဏ်များ, ဗဟိုဘဏ်များမှ, စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီတွေက, စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေများနှင့် တစ်ဦးချင်းစီကကုန်သည်တွေ, သူတို့သည် Forex ဈေးကွက်ထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်အဓိကအကြောင်းရင်းနေသောခေါင်းစဉ်:
hedging, ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမှဆင်းသက်လာငွေကြေးအားလုံး, ပွောငျးလဲနေသောမှအကာအကွယ်
သူတို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာကိုင်ဆောင်သူ၏စည်းစိမ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံခြားငွေအန္တရာယ်များနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ကထေမိဖို့လှုံ့ဆျောအတူ Forex ဈေးကွက်ထဲမှာပါဝင်ကြီးများနှင့်အသေးစားဘဏ်များ၏ရာပေါင်းများစွာအဖြစ်ရှိပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘဏ်, ကွဲပြားခြားနားစနစ်တကျပေမဲ့, အမိန့်ကွပ်မျက်, စျေးကွက်ကိုချမှတ်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်တစ်ခုပြုသောအမှုသည်စားပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။ ထိုပြုသောအမှုသည်စားပွဲခုံရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းခြံ, မဟုတ်သော, ဒါမှမဟုတ်နည်းဗျူဟာ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခင်းကျင်းမှတဆင့်တိုက်ရိုက်အကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်ငွေကြေးစေရန်စေနိုင်ပါတယ်။
ထိပ်တဆယ် table ထဲမှာကိုအောက်တွင်မြင်ကြသည်ထားတဲ့၏ transacted အသံအတိုးအကျယ်, အများစုသည်အအကောင့်က 25 အဓိကဘဏ်များရှိပါတယ်:
EuroMoney FX မဲပေးပှဲ
Deutsche ဘဏ် 1 14.56% -6.91%
Barclays Capital မှ310.95% 1.86%
HSBC က56.72% 7.35%
များတွင် RBS75.86% -5.48%
မော်ဂန်စတန်လေ93.52% -3.30%
source: http://www.Euromoney.com Forex စစ်တမ်း
ထိပ်ဆင့် interbank စျေးကွက်အားလုံးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ 53% တွက်သည်။ သူတို့နောက်သို့ (အန္တရာယ်စောငျရနျးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိန်ထမ်းပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်သည့်) Multi-အမျိုးသားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကနောက်တော်သို့လိုက်သေးငယ်ဘဏ်များ, ကြီးမားသောခြံရန်ပုံငွေများနှင့်အချို့သောကြီးမားသောလက်လီရှိပါတယ် FX စျေးကွက်ချမှတ်သူများ။
ဘဏ်များမကြာခဏစျေးကွက်ဦးတည်ချက်တစ်ခုအထူးသဖြင့်အမြင်အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းငွေကြေးစျေးကွက်များတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနေရာချ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် non-ဘဏ်လုပ်ငန်းသင်တန်းသားများမှသူတို့ကိုခွဲခြားဝယ်ယူသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ "အတွင်းလူ" သတင်းအချက်အလက်သည်နှင့်မဆိုပေးထားသောအချိန်ကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အကျိုးစီးပွားရောင်း, ရာ သူတို့ကိုလဲလှယ်နှုန်းကိုရောင်းဝယ်ခြင်းဖိအားအကြောင်းပိုမိုသိကျွမ်းခြင်းပညာကိုပေးတော်မူ၏။ အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းဘဏ်စျေးကွက်ထက်ပိုကြီးကြောင်း, ဘဏ်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဈေးကွက်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုဖို့ဆိုးရွားသောကြီးမားသောရွေ့လျားဖို့နည်းတူအားနည်းချက်ကြောင့်သို့သော်ဤအားသာချက်, ဆွေမျိုးတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ interbank စျေးကွက်ဘဏ်တွေအချင်းချင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတစ်ဖန်စီနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ဗဟိုစျေးကွက်နေရာအရပ်ကျောင်းပျက်။ အဆိုပါ interbank စျေးကွက်အကောင်းဆုံးငွေလဲနှုန်းညှိနှိုင်းရန်, ဘဏ်များနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်ကားစားပွဲခုံကတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့, ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သောကွန်ယက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည် interbank စျေးကွက်အများအပြားသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာတည်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဖြစ်ရပ်များ၏ 90 ရဲ့စီးရီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ကောင်းယူခွင့်ကုန်သည်တွေနှင့်ပွဲစားများ၏ပေါ်ပေါက်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စား interbank ဈေးကွက်ထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း (ထိန်းချုပ်မှုလျှော့, အင်တာနက်, အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုကွန်ရက်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းစနစ်များ ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်ရရှိမှု) ဖှငျ့ ပိုမိုမြင့်မားသောသြဇာ, နိမ့်နိမ့်ဆုံးနှင့် 24 /7ကုန်သွယ်ပူဇော်သော Forex ကုန်သွယ်ကမ်ဘာပျေါတှငျသစ်ကိုမှန်းဆအခွင့်အလမ်းများ။
ဗဟိုဘဏ်တွေသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ရအဓိကအကြောင်းပြချက်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဖြစ်ပေမယ့်, ထို Forex ဈေးကွက်ထဲမှာအဓိကကစားသမားများဖြစ်ကြပေမယ့်အစား (ပိုက်ဆံ၏ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ရရှိနိုင်မှု) သူတို့၏အစိုးရ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာပေါ်လစီများကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ငွေကြေး၏တန်ဖိုးများ၏ပွောငျးခွငျးထွက်လွယ်ကူချောမွေ့ကူညီရန် (အတိုးနှုန်း)။
တစ်ခိုင်တစ်ဦးထံမှလဲလှယ်မှုနှုန်းအတွက်စျေးနှုန်းအချို့အဆင့်ဆင့်ကာကွယ်ရန် လမ်းကြောင်းသစ် သို့မဟုတ်အချိုးမညီမျှမှု
စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များ (စသည်တို့ကိုငွေကြေးဖောင်းပွမှု, ကြီးထွားမှု,) အောင်မြင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်လိုက်တဲ့အခါ
တချို့ကဗဟိုဘဏ်တွေကိုအခြားသူများထက် ပို. ရှေးရိုးစွဲပါ၏ အချို့သော (ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်လိုမျိုး) ကိုမှန်မှန်ရောက်စွက်ဖက်။
အဆိုပါ Federal Reserve (အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က)
သြစတြေးလျ၏ Reserve Bank သည်
စျေးနှုန်းတွေကဆင်းတွန်းမှပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းစျေးနှုန်းတွေတွန်းဖို့ 1) တိုက်ရိုက်ဝယ်; ဗဟိုဘဏ်ကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအများအပြားပုံစံများကိုယူနိုင်ပါသည် 2) ကအားနည်းဆင်း, ငွေကြေးခိုင်မာစေရန်အတိုးနှုန်းတက်ရွေ့လျား; နှင့် 3) ကဈေးကွက်သို့နင်းကာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုမကြာခဏ "Jawbone" ဟုခေါ်အရာရှိတဦးကအရေးယူရန်ရှေ့ပြေး () အဖြစ်အနက်ငွေကြေး၎င်း၏ဦးစားပေးအဆင့်အထိခန့်မီဒီယာအတွက်မှတ်ချက်အသုံးပြုပုံဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကြောင်းအချက်ပြ။
အစွန်းရောက်အခြေအနေများတွင်ဥပမာ, ခိုင်ခံ့ပြီးနောက် လမ်းကြောင်းသစ် တစ်ဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုငွေလဲနှုန်း reverse နှင့်တစ်ဦးကိုပယ်ရန်ကြိုးစားမှုအတွက်မွေးစားစေခြင်းငှါအဖြစ်သို့မဟုတ်မညီမမျှငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းအတွက်, ဗဟိုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အပြောအဆိုနဲ့လုပ်ရပ်တွေကအာရုံစိုက် လမ်းကြောင်းသစ် စျေးကစားနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာ, ဆွစ်ဇာလန်အမျိုးသားဘဏ် (SNB) နှင့်များ၏ဘဏ် ဂျပန် နှစ်ဦးစလုံးဟာငွေကြေးစျေးကွက်ကြီးမားရွေ့လျားကိုမကြာသေးမီကသမိုင်းအတွက်ကြားဝင်ပါပြီ။ ။
(သေးငယ်တင်သွင်း / တင်ပို့သူများအနေဖြင့် Multi-ဘီလီယံ, Multi-အမျိုးသားရေးကော်ပိုရေးရှင်း) နဲ့ Big နှင့်အသေးစားကော်ပိုရေးရှင်း, ပြည်ပမှာစောင်ရန်းကိုအန္တရာယ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကုန်သွယ်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိန်ထမ်းပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက် Forex တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်သူတို့စီးပွားဖြစ်ဘဏ်များမှတဆင့်နိုင်ငံခြားငွေကြေးဆည်းပူးရန်လိုအပ်သည့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်မိမိတို့၏နေအိမ်ငွေကြေးသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာပေးဆောင်ခံရဖို့ကြိုက်တယ်။ စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီ Forex ဈေးကွက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ကသူတို့ထိတွေ့စောငျရနျးဖို့ဖြစ်ပါတယ်; ကုမ္ပဏီက၎င်း၏နေအိမ်ငွေကြေးအတွက်အနာဂတ်အတွက်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်, ထိုငွေကြေးကို depreciating ထားပြီးလျှင်ဥပမာအားဖြင့်, ကုမ္ပဏီက၎င်း၏နေအိမ်ငွေကြေး (ရောင်း) တိုတောင်းသွားနှင့်ရှည်လျားသွားပါလိမ့်မယ် (မဝယ်) အခွားငွေကြေး၏တူညီသောပမာဏ ငွေပေးချေမှုအရှင်စျေးနှုန်းအတက်အကျများ၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားလက်ခံရရှိခံရဖို့။
စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေများ အခြေခံအားဖြင့်နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းပိုက်ဆံမန်နေဂျာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေသူတို့ရဲ့ရေကန်အလွန်ကြီးမားဖြစ်လေ့အဖြစ်သူတို့က, သန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာအတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။ တစ်ခြံ၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဘီလီယံသို့ပြေးနိုင်, နှင့်စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုဘာလို့လဲဆိုတော့သြဇာနှင့်ငွေချေး၏မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားမန်နေဂျာပင်စင်ရန်ပုံငွေ, အာမခံကုမ္ပဏီများ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ, ချမ်းသာကြွယ်ဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, အစိုးရများနှင့်ပင်ဗဟိုဘဏ်အပါအဝင်ဖောက်သည်တစ်ဦးအကွာအဝေးကိုယ်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့။ အဖြစ်လူသိများအစိုးရ-run ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရေကန်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဥစ္စာဓနရန်ပုံငွေ (SWF) အချို့အတွက်မကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဘို့ခေါင်းစဉ်အာရုံကိုဖမ်းဆုပ်, မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာပါပြီ Wall Street က ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီကြီးများ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ခြံရန်ပုံငွေများယေဘုယျအားဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်တစ်ခု ပို. ပို. အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကစားပွီ, FX အဆိုပါ 2000s ကတည်းကအထူးသဖြင့်, ထိုသို့နိုင်ငံခြားငွေအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ် 80 ကျော်% မှန်းဆဖြစ်လာကြပါပြီအဘယ်ကြောင့်အဘို့အကောင့်သောထိုသူတို့၏တိုးတက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။
ငွေဖြစ်လွယ်သြဇာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များကဲ့သို့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအားသာချက်အချက်များကဤကြီးမားသောရန်ပုံငွေပါဝင်သူတစ်မူထူးခြားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပါ။ Forex ၏စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ segment ကိုအချိန်ရှေ့ဆက်လှုံ့ဆျောအဖြစ်ငွေကြေးခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်တန်ဖိုးများအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုမှလာခဲ့ပါသည်။ သူတို့ကတကယ်ရေရှည်ဖို့နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် (ရက်သတ္တပတ်) မှာကြီးမားပမာဏဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်း, ငွေကြေးစျေးကွက်ရွှေ့သောအဖွဲ့အစည်းများ (နှစ်) လဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားရေချိန်ပြန်လည်ညှိဖို့စျေးနှုန်းချိန်ညှိလိုအပ်, စျေးကွက် unbalance ။ ဥပမာ, ဘီလျံနာ ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့ (အထက်ပုံ) မိမိကံဇာတာကုန်သွယ် FX ကိုဖန်ဆင်း, သူ၏ Quantum ရန်ပုံငွေ 1990 ကတည်းကရန်လိုထင်ကြေးများအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါရန်ပုံငွေကိုတိုက်ရိုက်င်း၏မှန်းဆမဟာဗျူဟာအကျိုးခံစားရဖို့ငွေကြေးအပေါ်ဖိအားလျှောက်ထားစွပ်စွဲခဲ့သည်: ဟောင်းတဦးကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မဟာသီယာမိုဟာမက် 1997 အပေါ်အတွက်မလေးရှားရင်းဂစ်၏တန်ဖိုးအပြစ်တင် ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့. ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့ သူမျှသာနိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစနစ်အတွက်လူသိများအားနည်းချက်များကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးခဲ့ကာကွယ်ခဲ့သညျ။ အဆိုပါ counterargument အချို့နိုင်ငံများနှင့်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်များဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘဏ္ဍာရေးပူဖောင်းဖွံ့ဖြိုးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးစီးပွားရေး mishandle စေခြင်းငှါဖြစ်ပြီး, FX စျေးကစားမလွှဲမရှောင်ပြိုကျကြောင့်ကြာကြာရစ်နှင့်ပိုမိုကြီးမားဖြစ်လာမှခွင့်ပြုမယ့်အစားကရှိရာသို့အလျင်အမြန်ဖြစ်ပျက်ပါစေ။
ကျနော်တို့အသေးကုန်သည်များအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကုန်သည်များမှဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, လက်လီကုန်သည်များကိုခေါ်ပြီးလျှင်, အတွက်သော်လည်းကျနော်တို့ရဲ့ပါဝင်မှုနေကြတယ် FX စျေးကွက်နောက်ဆုံး 10 နှစ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးမြှင့်ထားပြီး, ကျနော်တို့နေဆဲသာတပြင်လုံးကို၏ 2% ပါဝင် FX ဘီလီယံကိုအမေရိကန် $ 50-60 ကျော်ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်အတူစျေးကွက်ကအသံအတိုးအကျယ်, ။
နှစ်ဦးအကျိုးအမြတ်ကြီးမားရေကူးကန်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့ငါးဖြစ်ခြင်းအတွက်ရှိပါသည်: အပိုကြီးတဲ့ volume ကုန်သည်များစျေးကွက်ရဲ့ငွေဖြစ်လွယ်မှထည့်ပါ, ငါတို့သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကျွန်တော်တို့ကိုစီမံကိုင်တွယ်ဖို့ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ချက်ချင်းပွင့်လင်းကွပ်မျက်: ကျနော်တို့ထားပြီးငွေဖြစ်လွယ်အားသာချက်အချက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချက်တစ်ချက်အဖြစ်ကောင်းစွာမှတ်သားဖို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဘောင်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းယေဘုယျအားဖြင့်တာတိုတောင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းအတွက်ဝယ်လိုအား / ထောက်ပံ့ရေးများမျှခြေပေါ်မဆိုသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သွယ်မော်ဒယ်များနှင့်အနိမ့် volumes ကိုကျွန်တော်တို့ကိုစျေးကွက်ဝင်ရောက်နှင့် exit လုပ်ဖို့ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပွဲစားများနှင့်ဘဏ်များယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုကျနော်တို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကုန်ကျအားသာချက်ပေးသော, ပိုကြီးတဲ့ clients များမှသိသိသာသာတင်းကျပ်တဲ့န့်ပေးသနားတော်မူကြောင်းသတိပြုသင့်ပါသည်။
ယခုငါတို့သေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းငါတို့သည်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအားသာချက်ဖုံးလွှမ်းပြီ (အသေးစိတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် entry နဲ့ထွက်ပေါက်အခွင့်အလမ်းများကို), ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်မီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးပါသည်: ဒီရေကူးကန်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့ငါးကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာကွင်းဆက်အပေါ်နိမ့်ဆုံးအရွယ်အစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကျနော်တို့အများဆုံးအလွယ်တကူဖွင့်ကိုစားကြသည်။ လက်လီကုန်သည် 95% ရှုံးသည်။ အဆိုပါပိုကြီးကုန်သည်များ (ထိုဘဏ်များ, ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ခြံရန်ပုံငွေများ) ဤရေထဲမှာငါးမန်းတွေဟာသူတို့နေ့ညဉ့်မပြတ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြတယ်, သူတို့စျေးကွက်၏ ins နှင့်တနေရာသိကြပြီးအားနည်းစားကြလော့။ သူတို့ကခေတ်မီ employ ကုန်သွယ်စနစ်များ အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံ၏သိသာအဆင့်ဆင့်မှာရပ်တန့်အမိန့်ကိုတင်ဖို့ပိုများပါတယ်ဘယ်သူ unsophisticated ကုန်သည်တွေထွက်ကြောင်းကို sniff ။ နယူးကုန်သည်များအခြေခံသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အတွေး၏လူကြိုက်အများဆုံးကျောင်းများအတိုင်းလိုက်နာဖို့ပိုများပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အတိုသက်တမ်း directional ဘက်လိုက်မှုမကြာခဏမြင်ငါးမန်းများကအမြတ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကပွဲစားများစိတ်ဓါတ်များကိုခေါ်မဆိုအပ်ပေးတော်မူအချိန်ပေါ်မဆိုအပ်ပေးတော်မူငွေကြေးအပေါ်ဘောင်းဘီတိုမှ Long သူတို့ရဲ့ In-အိမ်သူအိမ်သားအချိုးထုတ်ဝေရန်, သူတို့အများဆုံးလက်လီကုန်သည်များဆုံးရှုံးသည်ကိုသိရကတည်းကထောက်ခံချက်လက်လီစိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ် directional ဘက်လိုက်မှုမှတန်ပြန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အပိုကြီးကုန်သည်များမှသားကောင်ဖြစ်လာရှောင်ရှားရန်တစ်လက်လီကုန်သည်များအတွက်နိုင်ရန်အတွက်သူကအတွေး၏နောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်ပေါ်ပြူလာသတင်းဖြစ်ရပ်များနှင့်ကျောင်းများမဆိုအောက်ပါရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။ သူမည်သူမဆိုနောက်သို့လိုက်သွားလျှင်သူကအပတ်စဉ်ထုတ်တူကွဲပြားခြားနားသည့်စီးပွားရေးအစီရင်ခံစာများ၏သငျ့လျြောသောအနက်ကနေတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ရသောကြီးမားသောကစားသမားများ၏လှုပ်ရှားမှုများကို, ခြေရာခံဖို့ကြိုးစားနေမှပိုပြီးအကျိုးမပေးနိုင်စေခြင်းငှါ, ခေါက်ခုတင် မတူညီသောငွေကြေးအားလုံးအပေါ်ကြီးမားကုန်သည်များ၏ directional ဘက်လိုက်ဖော်ပြပေးသောအစီရင်ခံစာ။
တနည်းအားဖြင့်, တပိုကြီးအချိန်ဘောင်ဇယားအပေါ်စျေးနှုန်း action ကိုအောက်ပါအားဖြင့်ကြီးမားကုန်သည်များများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ လေးပါးကိုနာရီနဲ့နေ့စဉ်ဇယားတူအဆင့်မြင့်အချိန်ဘောင်သည်, ပိုကြီးတဲ့ကစားသမားများ၏ရည်ရွယ်ချက်များထုတ်ဖော်ပြောဆို။ တနည်းအားဖြင့်, တသေးငယ်တဲ့ကစားသမားများ၏ရေပန်းစားနေသောစိတ်ဓါတ်များမှ contrarian ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့, သငျသညျကြီးတွေနှင့်အသေးစားနှစ်ဦးစလုံးကုန်သည်များကျော်တစ်ဦးအစွန်းရှိသည်နှင့်ဤစနစ်စည်းကမ်းနှင့်ကုန်သွယ်ထားရမည်သို့မဟုတ် automatized ဖြစ်ကြောင်းခေတ်မီ Multi-အချိန်ဘောင် components နဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သင့်သည်။ နောက်ပိုင်းမှာပုဒ်မအတွက်ဒီအပေါ်ပို။
ချက်ချင်း Execution အဆင့်မြင့်